नुनको मूल्य बृद्धि नहुँदा संस्था घाटामा गएको सत्य हो
मंगलवार, भाद्र २९, २०७२
– गत बैशाखमा आएको भूकम्पले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा कस्तो क्षति भएको छ र पुननिर्माणको तयारी के छ ?
साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनलाई भुकम्पले त्यति धेरै क्षति पु¥याएको छैन हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय लगायतका केही ठाउँ असार परेको छ त्यो भन्दा बढी हाम्रो कर्मचारीको घरमा क्षति भएको छ । तापनि हामीले सदा झै कार्य सम्पादन नियमित गरिराखेका छौं । भूकम्पले क्षति भएका संरचनाहरुलाई पुननिर्माण गर्ने काम अब सुरु गर्दछौं ।
– भूकम्प पीडितहरुका लागि तपाईहरुले घर निर्माण गर्ने कार्य गर्ने भन्ने सुनिएको छ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हो कि व्यापार व्यवसाय हो प्रष्ट पारिदिनुस न ?
हो हामी भूकम्प पीडिहरुका लागि कर्कटपाता र घर निर्माण गर्न भारतीय र युएसका कम्पनीहरुसँग साझेदारीमा काम गर्न लाग्दैछौं । तर सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दा पनि सामाजिक काममा लागेका छौ भन्दा उपयुक्त होला । नाफा खाने भन्दा पनि भूकम्पको पीडामा मलहम लगाउने प्रयास हो । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै हामीले र हाम्रा कर्मचारीहरुका तर्फबाट राहत वितरण गर्ने काम गरिएको छ ।
– साल्ट ट्रेडिङले भूकम्पलाई समेत ध्यान दिँदै निर्माण सामाग्रीहरुको आयत तर्फ जाने योजना छ कि ?
त्यसतर्फ हामी लागेका छैनौ । खासगरी भूकम्प पिडितहरुलाई सकेसम्म मद्दत गर्ने काममा चै हामी लाग्छौं ।
– साल्ट ट्रेडिङको मुनाफा कस्तो छ ?
हामीले गत वर्ष मुनाफा सरकारले आयो नुनको मूल्य नबढाइदिएकाले हामीलाई नोक्सान प¥यो यो वर्षमा हामी आशावादी छौ तर हाम्रो संस्था मुनाफा कमाउनमा नलाग्ने संस्था भएकाले खासै नाफा होला भन्ने ठान्दिन । हाम्रो कम्पनी सेवा मुलक र सेवा दिने कम्पनी हो ।
– आयोडिन युक्त नुनमा किन घाटा त ? सरकारको ढुवानीमा अनुदान दिन्छ हैन र ?
सरकारले ढुवानीमा अनुदान उपलब्ध गराईराखेको छ । त्यसैगरी इन्डियन एम्बेसीलेपनि सहयोग गरिरहेको छ । आयोडिन नुनमा भारत सरकारले मद्दत गरेको छ । नुनको मुल्यमा सरकारले बृद्धि गर्न नमान्दा हामीले कतिपनि नाफा कमाउन सकेका छैनौ ।
– साल्ट ट्रेडिङभित्र समस्याहरु चाहि के कस्ता छन् त ?
साल्ट टे«डिङभित्र खासै समस्याहरु छैनन सानातिना समस्याहरु त जहाँपनि पनि हुन्छन् । सेवा दिने संस्था भएकाले राम्रोसँग काम गरौ भन्ने भावना हो त्यही कारणले नुनको क्वालिटीमा पनि सुधार गरेको नुन अभाव हुन नदिने र ढुवानी निरन्तर गरिरहेको अवस्था छ तसर्थ जनताबाट राम्रो रेस्पोन्स पाएको छौ र सरकारबाट पनि स्यावासी पाएकै छ । हुन त हामीले नुनमा एकाधिकार पाएकाले नुनको मूल्यमा बृद्धि गर्न सकिन्थ्यो तर हामीले कहिल्यै पनि आप्mनो रेट बढाएनौ । सरकारसँग नसोधि र परामर्श नगरी त्यो काम हामीले गरेनौ त्यसले गर्दा हाम्रो नाफा समिति छ । २÷४ वर्षसम्म पनि नुनको मूल्य सरकारले नबढाइदिएका कारण गत साल पेमेन्ट दिनपनि हामीले त्यस अघिको जगेडा कोषबाट दिनुप¥यो ।
– साल्ट ट्रेडिङले सुरु गन लागेको कर्कटपाताको व्यवसाय कस्तो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
हैन हामीले व्यवसाय नै गर्न लगेको हैनौ । खाली भूकम्प पीडित सहयोगको लागि मात्रै यो काम सुरु गर्न लागेको हौ । त्यसतर्फ हामीले व्यवसाय नै गर्ने गरी सोचेका छैनौ । हामी बरु भुकम्प पीडितहरुलाई राम्रो घर बनाउनमा राम्रो सहर बनोस भनेर युएन कम्पनीसँग सहकार्य गर्दछौ । गाउँहरु पनि सहर जस्तै होस भन्ने हामो चाहनाले यो काममा हामी लागेका चाहि पक्कै हो ।
– कहिलेसम्ममा तपाईहरुले घर निर्माण सुरु गर्नुहुन्छ त ?
भर्खरै सम्झौता भएको छ । १–२ महिनापछि काम सुरु होला । हाम्रो मेजोरेटी होइन, हामी सरिक भएर काम गर्न लागेका छौं ।
– अन्त्यमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका उपभोक्ताहरुलाई वार्षिक उत्सवको अवसरमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
उपभोक्ताहरु हामीसँग भन्नुस वा हाम्रो सेवाबाट सन्तुष्ट छन भन्ने हामीलाई लागेको छ । किनभने हामीले अहिलेसम्म केही सामाग्रीको अभाव हुन दिएको छैन । क्यालिटीमा पनि हामीले उति नै सुधार गरेर काम गरेका छौं । भूकम्पमा पनि हामीले हाहाकार हुन दिएनौ । अरु इन्डियाको भन्दा सस्तो मूल्यमा समेत बिक्री गरेका छौ । आवश्यक सर सल्लाह सुझावलाई हामी सबै स्वागत गर्दछौं ।
– वार्षिक उत्सव कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ त ?
सामान्य औपचारिक कार्यक्रम गर्ने सोचमा छौ । तामझाम गरेर हामीले कहिल्यै वार्षिकउत्सव मनाउँदैनौ ।
– कम्पनीले नाफा लिदैन भन्नु भो कसरी संस्था चल्छ त ?
नाफा खाँदै खाँदैनौ भनेका छैनौ थोरै खान्छौ । अर्बौ रुपैयाँको कारोबार गर्दा हाम्रो नाफा भनेको १–२ प्रतिशत मात्रै नाफा राख्ने हो । अर्कोको काम गर्नुको हिसावमा त हामीले कति नाफा लिन सक्थ्यौ तर हामीले गरेनौ ।
– ५ प्रतिशत नाफा त जसले पनि राख्दछन् भन्छन् नि ? १–२ प्रतिशत नाफा राख्छौ भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्ने ?
ठूलो काम छ । १–२ प्रतिशत नाफाले पनि कम्पनी सञ्चालन भएको छ । त्यहि नाफाबाट बोनस अलि अलि खुवाउन सकेको हो । वर्षेअघि हामीले किनिराखेको जग्गाको मुल्य आजको दिनमा त्यसको भ्यालु धेरै भएकाले मात्रै यो कम्पनी अड्न सकेको हो । त्यही जग्गा हामीले कालीमाटीमा १३ लाखको दरमा किनेकोमा अहिले अर्बौ रुपैयाँ पुगेको छ त्यस्तो तरिकाले हामीले टिकेका हौं । नाफाले होइन । अहिलेपनि साल्ट्र टे«डिङको पूँजी ७ करोड हो तर हामी अर्कोको काम गरी राखेका छौ । जगेडा २ अर्ब पुगिसकेको छ । सकेसम्म पूँजी पनि बृद्धि गर्ने सोचमा छौ । हामी त बैंकको लोनले काम गरिराखेको छौ नि ।